စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - HelpMEHemp
ဇန်နဝါရီလ 01, 2020
HelpMEHemp (Ltd) ("us", "we") မှလုပ်ကိုင်သော http://helpmehemp.org ဝက်ဘ်ဆိုက် ("၀ န်ဆောင်မှု") ကိုမသုံးမီဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ("စည်းကမ်းချက်များ", "စည်းမျဉ်းများနှင့်အခြေအနေများ") ကိုသေချာဖတ်ပါ။ သို့မဟုတ် "ငါတို့") ။
သင့်ရဲ့ရန်လက်လှမ်းနှင့် of Service ကိုအသုံးပြုမှုသည်သင်၏၏လက်ခံမှုနှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုအတူလိုက်နာမှုအပေါ်မှာသက်ရောက်အေးစက်နေသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များဝန်ဆောင်မှုရယူသို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့ဆန္ဒရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ဧည့်သည်များအသုံးပြုသူများနှင့်အခြားသူများသက်ဆိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုရယူသုံးသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူသည်။ သငျသညျစည်းကမ်းချက်များမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသဘောမတူလျှင်သင် Service ကိုဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်မရှိကြပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းလွှာများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့နိုင်သည့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်သင်သဘောတူသည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သောမည်သည့်အီးမေးလ်တွင်မဆိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူမှပယ်ဖျက်သည့်လင့်ခ်သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဤဆက်သွယ်မှုအားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးထံမှလက်ခံခြင်းကိုငြင်းပယ်နိုင်သည်။
သင်ဝန်ဆောင်မှု ( "အရစ်ကျ") မှတဆင့်ရရှိနိုင်လုပ်မဆိုကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်, န့်အသတ်မရှိဘဲ, သင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်, သင့်ရဲ့အကြွေးကဒ်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ, အပါအဝင်သင့်ရဲ့အရစ်ကျမှသက်ဆိုင်ရာအချို့သောသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ဖို့တောင်းစေခြင်းငှါ သင့်ရဲ့ငွေတောင်းခံလိပ်စာ, နှင့်သင့်ရေကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။
သငျသညျကိုကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်အကြောင်းခိုင်လုံ: (ဈ) သင်သည်မည်သည့်ဝယ်ယူနှင့် ဆက်စပ်. မဆိုခရက်ဒစ်ကဒ်ကို (s) များသို့မဟုတ်အခြားပေးချေမှုနည်းလမ်း (s) ကိုသုံးစွဲဖို့တရားဝင်ခွင့်ရှိသည်, နှင့် (ii) သင်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့သတင်းအချက်အလက်များ, စစ်မှန်တဲ့မှန်ကန်သောနှင့်ပြည့်စုံသည်။
၀ န်ဆောင်မှုသည်ငွေပေးချေခြင်းနှင့် ၀ ယ်ခြင်းများပြီးမြောက်ရန်အတွက် third party ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီနှင့်အညီဤတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာတွင်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တွေ့ရသောအချက်အလက်များတွင်အမှားများ၊ ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစျေးနှုန်းအတိအကျမဖော်ပြနိုင်ခြင်း၊ မတိကျသောဖော်ပြချက်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်မရရှိနိုင်ပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တွေ့ရသောမည်သည့်အချက်အလက်များ၏တိကျမှုသို့မဟုတ်ပြည့်စုံမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကသင့်အားသတင်းအချက်အလက်၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ဗွီဒီယိုများသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာများ ("အကြောင်းအရာ") ကိုတင်ရန်၊ ချိတ်ရန်၊ သိမ်းရန်၊ သင် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်သင့်လျော်ခြင်းအပါအ ၀ င်သင် ၀ န်ဆောင်မှု၌တင်သောသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာအတွက်သင့်တွင်တာ ၀ န်ရှိသည်။
၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တင်ခြင်း (သို့) ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်သင်က (၁) အကြောင်းအရာသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှု (သင်ပိုင်ဆိုင်သည်) နှင့် / သို့မဟုတ်သင်၌အသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအခွင့်အရေးနှင့်လိုင်စင်များကိုပေးအပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် (၂) ၀ န်ဆောင်မှုတွင် ၀ င်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အကြောင်းအရာကိုတင်ခြင်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးများ၊ လူသိရှင်ကြားအခွင့်အရေးများ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ကန်ထရိုက်အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်အခြားလူတစ် ဦး တစ်ယောက်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အခြားအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်သည်ဟုတွေ့ရှိသူမည်သူမဆို၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင်သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တင်ထားသော၊ တင်ခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်းနှင့်ပြသသည့်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုသင်၏အခွင့်အရေးအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားပြီးထိုအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်သင်၌တာဝန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားမရှိဘဲသင်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်သို့မဟုတ်မှတစ်ဆင့်သင်နှင့်ပါ ၀ င်သည့်တတိယပါတီရေးသားချက်များအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ သို့သော် ၀ န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ အကြောင်းအရာများကိုတင်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား ၀ န်ဆောင်မှုတွင်၎င်းမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုရန်၊ ပြုပြင်ရန်၊ လူသိရှင်ကြားလုပ်ဆောင်ရန်၊ လူသိရှင်ကြားပြသရန်၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်အခွင့်အရေးနှင့်လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုထားသည်။ ဤလိုင်စင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီသင့်အကြောင်းအရာများကိုသုံးနိုင်သည့်အခြားဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများအားသင်၏အကြောင်းအရာများကိုရရှိနိုင်စေရန်သင်ပါဝင်သည်ကိုသင်သဘောတူသည်။
HelpMEHemp (Ltd) သည်အသုံးပြုသူများမှပေးသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်တည်းဖြတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တွေ့ရှိသောသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများသည် HelpMEHemp (Ltd) ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း၊ ပြန်လည်ကူးယူခြင်း၊ ကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းများကိုစီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးအမြတ်အတွက်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ထံမှကြိုတင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရဘဲဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊
သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးသည့်အခါသင် 18 များ၏အသက်အရွယ်အထက်တွင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံ, သင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသတင်းအချက်အလက်များ, တိကျမှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံသော, လူအပေါင်းတို့အချိန်များတွင်လက်ရှိကြောင်း။ , တိမပြည့်စုံ, ဒါမှမဟုတ်အသုံးမပြုတော့တဲ့သတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်ချက်ချင်းရပ်စဲဖြစ်ပေါ်စေမည်။
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့် / သို့မဟုတ်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်များ၏ကန့်သတ်ကန့်သတ်, သင့်အကောင့်နဲ့ password များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအပါအဝင်သော်လည်းမတာဝန်ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ password ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ် Third-party ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူရှိ, မရှိ, သင့်အကောင့်နှင့် / သို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုအောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဆိုအပေါင်းတို့နှင့်လှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်တာဝန်လက်ခံရန်သဘောတူသည်။ သင်သည်သင်၏အကောင့်လုံခြုံရေးအတွက်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲခြင်းမဆိုချိုးဖောက်သတိထားဖြစ်လာအပေါ်သို့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်လျော်သောခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ, သင်တို့ထက်အခြားအခြားသူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုအခွင့်အရေးဘာသာရပ်သောအမည်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအားသင်အသုံးပြုသူအမည်အဖြစ်အခြားသူတစ်ဦး၏အမည်သို့မဟုတ် entity ကိုအသုံးမပြုစေခြင်းငှါသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုအတွက်တရားမရရှိနိုင်။ သင်တစ်ဦးအသုံးပြုသူအမည်အဖြစ်, ထိုးစစ်အောက်တန်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောကြောင်းမည်သည့်ဘွဲ့နာမကိုမသုံးနိုငျသညျ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုငြင်းဆန်ခြင်း၊ အကောင့်များရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ အကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အမိန့်များကိုပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၀ န်ဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏မူရင်းအကြောင်းအရာ (သုံးစွဲသူများမှပေးသောအကြောင်းအရာများမှ လွဲ၍)၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် HelpMEHemp (Ltd) နှင့်၎င်း၏လိုင်စင်ရသူများ၏သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်တည်ရှိနေလိမ့်မည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အခြားဥပဒေများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ HelpMEHemp (Ltd) ၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေး ၀ တ်စုံများသည်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးတွင်မဆိုအသုံးမပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည် HelpMEHemp (Ltd) မှပိုင်ဆိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းမပြုသောတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့လင့်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။
HelpMEHemp (Ltd) သည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါ၊ မည်သည့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အကြောင်းအရာ၊ privacy မူဝါဒများသို့မဟုတ်အလေ့အကျင့်များအတွက်တာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအဖွဲ့အစည်းများ / လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အာမခံချက်မရှိပါ။
ရရှိနိုင်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများ, ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပေါ်အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်အားကိုးသို့မဟုတ်ပေါ်မူတည်သောကြောင့်ထိခိုက်မှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် HelpMEHemp (Ltd) ကိုတာဝန်ခံသို့မဟုတ်တာဝန်ရှိသည်, တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်, မဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သဘောတူ သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုချက်ချင်းပင်ကြိုတင်အသိပေးခြင်းသို့မဟုတ်တာ ၀ န်ယူခြင်းမရှိပဲကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းအပါအ ၀ င်၊
သင်၏အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းလိုပါက ၀ န်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်နိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝအားဖြင့်ရပ်စဲရှင်သန်သင့်တယ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံးပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ, န့်အသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ပိုင်ဆိုင်မှုပြဌာန်းချက်, အာမခံအကြောင်းသတိပြုစရာများ, လျော်ကြေးများနှင့်တာဝန်ယူမှုများန့်အသတ်များအပါအဝင်ရပ်စဲရှင်သန်ရလိမ့်မည်။
ထိခိုက်နစ်နာမှု၊ တာ ၀ န်ယူမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များသို့မဟုတ်ကြွေးမြီများမှဆန့်ကျင်။ မည်သည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်မှုမရှိသော HelpMEHemp (Ltd) နှင့်၎င်း၏လိုင်စင်ရသူနှင့် ၄ င်းတို့၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များ၊ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း၊ သင်သို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်နှင့်စကားဝှက်ကိုအသုံးပြုသောမည်သူမဆို ၀ န်ဆောင်ခများအပါအ ၀ င်ကုန်ကျစရိတ်များ (ရှေ့နေ၏အခကြေးငွေများအပါအ ၀ င်)၊ ခ) ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ် (ဂ) ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တင်ထားသောအကြောင်းအရာများ။
၀ န်ထမ်းများ၊ မိတ်ဖက်များ၊ အေးဂျင့်များ၊ ပေးသွင်းသူများသို့မဟုတ်ဆက်စပ်သူများအားမည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှကန့်သတ်ခြင်းမရှိခြင်း၊ အမြတ်အစွန်းများဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဒေတာ၊ အသုံးပြုခြင်းအပါအ ၀ င်မည်သည့်သွယ်ဝိုက်၊ (ဂ) သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုနိုင်ခြင်း (သို့) မသုံးစွဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောချစ်ကြည်ရေးသို့မဟုတ်အခြားသိမ်မွေ့သောဆုံးရှုံးမှုများ၊ (၂) ၀ န်ဆောင်မှုတွင်မည်သည့်တတိယပါတီ၏မဆိုအမူအကျင့်သို့မဟုတ်ပါဝင်မှု၊ (၃) ၀ န်ဆောင်မှုမှရရှိသောအကြောင်းအရာ၊ နှင့် ()) သင်၏ထုတ်လွှင့်မှုသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာများကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အာမခံခြင်း၊ ကန်ထရိုက်ခြင်း၊ တရားမ ၀ င်မှုအပါအ ၀ င်အခြားတရား ၀ င်သီအိုရီများအရဖြစ်စေ၊ ထိုကဲ့သို့သောပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည်ဖြစ်စေ၊ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောဆေးတစ်လက်သည်၎င်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရည်ရွယ်ချက်ကိုပျက်ကွက်သည်ဟုတွေ့ရှိပါက။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏တစ်ခုတည်းသောစွန့်စားမှုဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကို“ AS IS” နှင့်“ AS AVAILABLE” အခြေခံပေါ်တွင်ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသည်မည်သည့်အာမခံချက်မဆို၊ တိတိကျကျဖြစ်စေ၊ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်သင့်လျော်ခြင်း၊
HelpMEHemp (Ltd) ၏လက်အောက်ခံများ၊ တွဲဖက်များနှင့်လိုင်စင်ရသူများက (က) ၀ န်ဆောင်မှုသည်အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးအချိန်မရွေး၊ လုံခြုံမှုရှိ၊ (ခ) အမှားအယွင်းများ၊ (ဂ) ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ဗိုင်းရပ်စ်များသို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများမရှိခြင်း၊ (d) ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရလဒ်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များမဆိုညာဘကျသို့မဟုတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ပြဋ္ဌာန်းရန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျက်ကွက်သူတွေကိုအခွင့်အရေးကိုတစ်ဦးစွန့်လွှတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ဤသတ်မှတ်ချက်များမဆိုပြဋ္ဌာန်းချက်တရားရုံးအားဖြင့်မမှန်ကန်ပါသို့မဟုတ်မပြုနိုင်ဖြစ်ကျင်းပလျှင်ဤသတ်မှတ်ချက်များကျန်ရှိနေသေးသောပြဋ္ဌာန်းချက်အကျိုးသက်ရောက်မှု၌တည်နေပါလိမ့်မယ်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ငါတို့စပ်ကြားတစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းလျက်, ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ငါတို့အကြားခဲ့ကြလိမ့်မယ်မဆိုကြိုတင်သဘောတူညီချက်များကိုပယ်ဖျက်အစားထိုးခြင်းနှင့်အစားထိုးလိုက်ပါ။
ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုဤသတ်မှတ်ချက်များကိုပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်အစားထိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်, ခွင့်ရှိသည်။ တစ်ဦးတည်းဖြတ်မူပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံး 15 ရက်ပေါင်းပေးသွားမှာပါကြိုတင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယူပြီးအသစ်ဝေါဟာရများမှသတိထားမိ။ ဘာပစ္စည်းပြောင်းလဲမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်ရှိပါသည်။
ထိရောက်သောဖြစ်လာမဆိုတည်းဖြတ်မူများကိုပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုရယူသို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ဖြင့်, သင်သည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအသုံးအနှုန်းများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူသည်။ သငျသညျသစ်ကိုဝေါဟာရများမှသဘောမတူဘူးဆိုရငျ, သင်တို့သည်နောက်တဖန်ထိုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ရှိပါသည်။